Soo hel shirkadda iPhone-kaaga - Soo ogow wadaha iyo haddii uu lacag la’aan yahay
Boggan waxaad ka ogaan kartaa waxa shirkadu waa iPhone-kaaga, taasi waa, shaqaaleeyaha asal ahaan ku xiran. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ogaan kartaa haddii ay ku habboon tahay qandaraaska muddada ama hadday mar hore tahay a bilaash ah iPhone warshad ama la sii daayay.
Sidan ayaad ku ogaan kartaa haddii IPhone-ka aad iibsatay ama aad qorsheyneyso inaad iibsato uu buuxiyo shuruudaha laguu sheegay iyo haddii ay furi karto IMEI.
1 Soo hel shirkadda taleefankaaga iPhone-ka
2 Maxaan u doonayaa inaan ku ogaado shirkadda iphone ka?
Soo hel shirkadda taleefankaaga iPhone-ka
U isticmaal foomka soo socda si aad u ogaatid shirkadda ka hawlgasha taleefankaaga iPhone:
Waxaad ka heli doontaa dhammaan xogta laga helo iPhone-kaaga e-maylka la xiriira koontadaada Paypal ama emaylka aad qorto haddii aad ku bixiso kaarka deynta. Caadi ahaan waxaad ku heli doontaa macluumaadka 5 ilaa 15 daqiiqo gudahood, laakiin xaaladaha qaaska ah waxaa laga yaabaa inay dib u dhacaan illaa 6 saacadood.
Warbixinta aad heli doontaa waxay lamid noqon doontaa tan:
Lambarka taxanaha: AB123ABAB12
Model: IPHONE 5 16GB MADOW
Hawl wade: Movistar Spain
Bilaash: Maya / Haa
Heshiiska joogtada ah ee laxiriira: Maya / Haa, ilaa Maajo 16, 2015
Si aad u furto iPhone-kaaga waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda / Ma furi kartid iPhone-kaaga
Sidoo kale haddii aad rabto sidoo kale waad hubin kartaa haddii kanagu iPhone waxaa xiray qufulka IMEI Adoo ku dooranaya hoos-u-dhaca bixinta, waxaad kaliya bixin doontaa € 3 ama $ 4 dheeraad ah.
Maxaan u doonayaa inaan ku ogaado shirkadda iphone ka?
Aad ayey ugu habboontahay in la ogaado shirkadda aad ku xiran tahay, waana marka a iPhone waa ku xaddidan yahay hal side, Waxaan kaliya u isticmaali karnaa shirkadda ay ka tirsan tahay. Sidan oo kale, waxay noqon doontaa culays in la helo iPhone gacan labaad ah oo aan ku xirnayn shirkadda taleefanka ee aan hadda isticmaalno, marka lagu daro, Xaqiiqda ah in aaladdu ay lacag la’aan tahay ayaa lagu daray, maxaa yeelay waxaan kala beddeli karnaa shirkadaha taleefannada gacanta ee kala duwan oo na siiya sicirro badan oo tartan ah, sidaa darteed waxaan ku dhammaan doonnaa keydinta qaddar fiican oo lacag ah.
Waa tan oo dhan in adeegeena uu kuu oggolaanayo inaad si fudud ku ogaatid dhammaan xogta ku saabsan iPhone, oo ay ku jiraan wadaha oo ay iska leedahay. Sidan ayaad uga hortagi kartaa dib u dhacyada suurtagalka ah ee laga soo qaaday shirkadda taleefanka ee qalabka ku xiran yahay. Ha ka waaban mar dambe, kana faa'iideyso dalabkeena.